ANTOKO MAITSO : Handray anjara mavitrika amin’ny fifidianana | Madatopinfo
ANTOKO MAITSO : Handray anjara mavitrika amin’ny fifidianana
2018, taona hiatrehan’ny vahoaka Malagasy ny fifidianana ho Filoham-pirenena. Taona ihany koa hiazakazahan’ny Antoko politika sy fikambanana maneho ny heviny. Antoko maitso hasin’i Madagasikara, isan’ireo antoko dimy matanjaka mivondrona ao anatin’ny ARMADA izay.
Efa manana ny fandaharan’asany manokana ity antoko ity ary efa eo am-pamolavolana izany ny ao anatiny hoy ny Filoha nasionaly Alexandre Georget. “Tsy fantatray ny antony hanakatonan’ny CENI ny lisim-pifidianana amin’izao fotoana izao sahady, nefa amin’ny volana Novambra na Desambra vao hisy ny fifidianana. Ka mbola mangataka ny CENI izahay mba hisokatra hatramin’ny herinandro alohan’ny fotoam-pifidianana mihitsy ny fanamarinana ny lisim-pifidianana sy ny fisoratana anarana amin’izany”, hoy hatrany ny fanampim-panazavany. Raha tsiahivina ny vokatra voaray avy amin’ny CENI tamin’ny 31 janoary lasa teo, 4,94 isan-jato ny tahan’ny fisoratanana anarana ao anaty lisim-pifidianana ary mpifidy miisa 9.678.606 no voarakitra raha amin’ny 15 aprily kosa vao hivoaka ny vokatra raikitra.
“Raha ny voalazan’ny lalam-pifidianana dia tokony amin’ny volana Novambra na Desambra no hanatanterahana ny fifidianana. Tokony hofantatra dieny izao tokoa mantsy ny datim-pifidianana ahafahan’ny rehetra mihomana”, hoy hatrany ny Filoha nasionalin’ny Antoko Maitso hasin’i Madagasikara. Raha ny fantatra hatreto, kandida tokana ny hatolotry ny avy ao amin’ny ARMADA amin’ity fifidianana izay ho Filoham-pirenena ity ary mbola andrasana noho izany ny fanambarana ofisialy.
Niteraka resa-be teto amin’ny firenena ny fisandratana 2030 nampahafantarin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha tamin’ny 26 janoary lasa teo iny. Maro ireo mpanao politika sy ny olon-tsotra no tsy nankasitraka izany indrindra fa ny avy amin’ny mpanohitra. “Izahay dia miarahaba ny Filoha nahavita izay efa-taona lasa izay fa saingy talanjona izahay tamin’iny fisandratana 2030 iny. Araka ny voalazan’ny lalam-panorenana, tsy azo ampitomboina ny fotoam-paharetan’ny fitondran’ny Filoham-pirenena, izany hoe tokony ho vina 2023 izany no nataon’ny Filoha fa tsy mitombina ny vina 2030 raha tsy hoe hanova ny lalam-panorenenana ny Filoha nefa izany fanovaovana lalam-panorenena izany no anisan’ny manapotika ity firenentsika ity”, araka ny hevitry ny Antoko maitso. Tsy mitady toerana eo amin’ny fitondrana ho avy ny Antoko maitso fa ny hanasoa ny vahoaka Malagasy amin’ny alalan’ireo fandaharan’asan’ny antokony efa mipetraka.
Isan’ireo antoko mitàna ny heviny hatramin’ny ny farany ity antoko tarihin’Andriamatoa Alexandre Georget ity ary mijoro manohitra ny tsy ara-dalàna eto Madagasikara. Misokatra ihany koa ho an’ny rehetra ny varavaran’ny antoko Maitso.